Shiinaha Spot light PL023 warshad iyo soosaarayaasha | Eurborn
Qalabka Fasalka 316 ee birta ah ee birta ah ee birta ah oo dhammaystiran oo dhammaystiran oo leh muraayad xirmo ah oo CREE LED ah, qalab lagu qiimeeyay IP68 oo u oggolaanaysa quusin biyaha taas oo diidaysa arrimaha guud ee ka dhasha la'aanta dheecaanka ciidda. 20/45/60 Kala-goynta darajooyinka farsamada. ilo waxay xaqiijineysaa Ilaalin adag oo ka dhan ah soo gelinta biyaha. wax soo saarku wuxuu qabtaa kulan qabow dhammaan taabashada shuruudaha Heerkulka.Ideal sida dusha sare ee dusha iftiinka Marker. Iftiinka banaanka oo yar yar oo leh awood 3 * 1W ayaa loo isticmaali karaa iftiinka gidaar dhaqida, iftiinka muuqaalka deegaanka, nalalka barxada. Waxay ku siinaysaa xulashada midabada Iftiinka: RGB, CW, WW, NW, Red, Green, Blue, Amber. Taxane qoys oo ka kooban ML1021, PL021, PL023, iyo PL026. Waxaad sidoo kale ku arki kartaa muuqaalka yar ilaa weyn bogga hore ee degelkeenna si taxaddar leh. EURBORN waxaa ka go'an inay daryeesho faahfaahinta ay dadka kale iska indhatireen. Wixii hadhuudh kasta oo fiican oo ku yaal badeecada, waxaan u isticmaalnaa qalabka ugu fiican iyo ka shaqeynta boolal. Waxaa loo isticmaali karaa sidii loogu adeegsan lahaa birta hagaajinta laydhka banaanka, nalalka barta birta ah ee birta ah, iyo nalalka dayrta ee biyuhu ka soo galaan.
Gaadiidka iyo baakadaha
Waan ka duwanahay
Isha iftiinka LED Awoodda Sare ee LED
Midabka Iftiinka RGB, CW.WW, NW, Casaan, Cagaar.Blue, Amber
Indhaha S2O ° / F6O °
Koronto N / A
Qiimeynta IP IP68
Heerkulka heerkulka -20 ° C ~ + 45 ° C
Celceliska nolosha 5O, OOOHrs
Qalabka (Ikhtiyaar) N / A
Codsiyada Gudaha / Bannaanka / Muuqaalka / Submersible
PL023 NALKII SPOT
MUUQAAL MAYA. Brand Brand Midab Dogob PowerMode Gelinta Fiilooyinka Xarkaha Awood Dheecaan iftiin leh Cabbir Qiyaasta
PL023 CREE CW, WW, NW, Casaan Casaan, Buluug, Amber S20 / F60 Joogto ah 350mA Taxanaha 3M 2X0.75mm² Xarig 3W 300LM 70x70x89 N / A
PL023D CREE CW, WW, NW, Casaan Casaan, Buluug, Amber S20 / F60 Danab joogto ah 24VDC Is barbar dhig 3M 2X0.75mm² Xarig 3.5W 300LM 70x70x89 N / A
PL023RGB Edison RGB 10/20/45/60 Joogto ah 350mA Taxanaha 2x3M 4X0.5mm² Xarig 9W N / A 70x70x89 N / A
PL023DMX-RGB Edison RGB 45 Danab joogto ah 24VDC DMX maamusha Is barbar dhig 1.1M 4X0.5mm² Xarig 3.5W N / A 70x70x89 N / A
DMX decoder dhisme ahaan * IES Taageerada xogta.
Map Khariidadda mashruuca
Hore: Iftiinka barta 'PL026'
Xiga: Iftiinka barta 'PL021'
Dhammaan alaabooyinka waa la baakadeyn doonaa oo la rari doonaa oo keliya marka alaabada oo dhami ay soo marto tijaabooyin kala duwan oo kala duwan, baakiduna sidoo kale waa qaybta ugu muhiimsan ee aan la iska indho tiri karin. Maadaama ay laydhadhka birta ah ee birta ah ay aad u culus yihiin, waxaan u dooranay kartoonka jiingada ugu fiican uguna adag faahfaahinta baakadaha si loo hubiyo in badeecada si wanaagsan looga ilaalin karo saameynta ama kuuskuusyada inta lagu jiro gaadiidka. Wax soo saar kasta oo ka mid ah Oubo wuxuu u dhigmaa sanduuq gudaha u gaar ah wuxuuna dooran doonaa nooca baakadaha u dhigma iyadoo loo eegayo dabeecadda, gobolka iyo culeyska alaabada la soo daabacay si loo hubiyo in badeecad kasta la buuxiyo iyadoo aan laga tagin farqiga u dhexeeya sanduuqa iyo badeecadda oo go'an sanduuqa. Baakadahayaga caadiga ahi waa sanduuqa gudaha ee jiingad bunni ah iyo sanduuqa dibedda ee jiingado kafee ah. Haddii macaamilku u baahan yahay inuu sameeyo sanduuq midab gaar ah u leh badeecada, sidoo kale waan ku guuleysan karnaa, illaa iyo inta aad horay ugu sii ogeysiisay iibkeenna, waxaan ku sameyn doonnaa wax ka beddel la mid ah marxaladda hore.
Maaddaama ay tahay soo saare xirfadle ah nalalka birta ah ee birta ka sameysan, Eurborn waxay leedahay sheybaarro tijaabo ah oo u gaar ah. Waxaan si dhib leh ugu tiirsaneyn dhinacyada saddexaad ee naloo soo gacan galiyay maxaa yeelay waxaan horeyba u haysannaa taxane ah qalab xirfadeedka ugu horumarsan uguna dhameystiran, iyo dhammaan qalabka si joogto ah ayaa loo kormeeraa loona dayactiraa. Hubso in dhammaan qalabka ay u shaqeyn karaan si caadi ah isla markaana ay ku sameyn karaan waqtiga saxda ah iyo xakameynta tijaabooyinka la xiriira sheyga marka ugu horreysa.
Aqoon isweydaarsiga Eurborn wuxuu leeyahay mashiinno badan oo xirfadlayaal ah iyo aalado tijaabo ah sida foornooyinka hawo kululaynta, mashiinnada faaruqinta faaruqinta, qolalka baaritaanka UV ultraviolet, mashiinnada calaamadeynta laser, qolladaha baaritaanka heerkulka joogtada ah iyo qoyaanka, mashiinnada baaritaanka lagu buufiyo milixda, nidaamyada falanqaynta falanqaynta muuqaalka degdegga ah ee loo yaqaan 'LED', Qaybta xoogga ee qaybinta xoogga nidaamka imtixaanka (imtixaanka IES), foornada daweynta UV iyo foornada qalajinta heerkulka elektaroonigga ah, iwm. Waxaan ku guuleysan karnaa nidaam tayo sare leh oo tayo sare leh oo loogu talagalay badeecad kasta oo aan soo saarno.
Badeecad kastaa waxay mari doontaa 100% tijaabada mitirka elektarooniga ah, 100% baaritaanka gabowga iyo 100% baaritaanka biyuhu. Sida laga soo xigtay sannado badan oo waayo-aragnimo ah, bay'adda soo food saartay alaabtu waa boqollaal jeer ka adag tahay laydhadhka gudaha ee nalalka bannaanka ee dhulka hoostiisa iyo biyaha hoostooda. Waxaan si fiican uga warqabnaa in laambaddu aysan ku arki karin wax dhibaato ah muddo gaaban gudaheed meelaha caadiga ah. Waxyaabaha loo yaqaan 'Eurborn', waxaan si gaar ah ugu xeel dheer nahay hubinta in laambaddu ay ku guuleysan karto waxqabadka muddada dheer ee xasilloonida ee jawiyada kala duwan ee adag. Jawiga caadiga ah, tijaabadayada jawiga la moodo ayaa dhowr jeer ka adag. Jawigan adag wuxuu tusi karaa tayada nalalka LED-ka si loo hubiyo inaysan jirin wax cillad leh. Kaliya kadib markii lagu baaro lakabyada ayaa Ober noo soo saari doontaa alaabada ugu fiican Macaamiisha gacanta.
Jirka laambadda sheyga wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah SNS316L. 316 ahama wuxuu ka kooban yahay Mo, kaas oo ka fiican caabbinta daxalka marka loo eego 304 birta birta ah ee kuleylka kuleylka leh 316 wuxuu inta badan yareeyaa waxyaabaha kujira Cr wuxuuna kordhiyaa waxa kujira Ni wuxuuna kordhiyaa Mo2% ~ 3%. Sidaa darteed, awooddeeda kahortaga daxalka ayaa ka xoog badan 304, oo ku habboon isticmaalka kiimikada, biyaha badda iyo deegaanno kale.
Ilaha iftiinka LED-ka wuxuu qaataa nooca CREE. CREE waa hormuudka hal-abuurka nalalka iyo soo saaraha semiconductor ee suuqa. Faa'iidada jajabku waxay ka timaaddaa walxaha silsiladda loo yaqaan 'Silicon carbide (SiC)', oo u adeegsan kara awood badan meel yar, iyada oo la isbarbar dhigayo Teknoolojiyada kale ee jira, agabka iyo alaabooyinka soo saara kuleylka yar. CREE LED wuxuu isku daraa walxaha tamarta ku shaqeeya ee tamarta ku shaqeeya ee loo yaqaan 'Flip-chip InGaN' iyo shirkadda G · SICetary ee mulkiilaha u leh hal mid, sidaa darteed LED-yada xoojinta iyo waxtarka sare leh waxay gaarayaan waxqabadka ugu fiican.
3.Garaasku wuxuu qaataa muraayad qabow + qayb ka mid ah shaashadda xariirta, dhumucdiisuna waa 3-12mm.
4.Shirkaddu had iyo jeer waxay soo xushay aaladaha aluminium ee wax-qabadka sare leh ee kuleylka kuleylka ee ka sarreeya 2.0WM / K. Qalabka aluminium ayaa loo isticmaalaa sida qalabka kuleylka tooska ah ee loogu talagalay LED-yada, kuwaas oo si dhow ula xiriira nolosha shaqada ee LED-yada. Qalabka aluminium ee kuleylka kuleylka sareeya wuxuu leeyahay hago wanaagsan iyo karti u lahaansho kuleyl, wuxuuna aad ugu habboon yahay alaabada u baahan awoodaha kala-baxa kuleylka, gaar ahaan LED-yada awoodda sare leh.
Bannaanka Barta Bannaanka
Pin Spot Laydhka
Laydhka Tooska ah
Ogeysiis muhiim ah: Waxaan mudnaanta siin doonaa farriimaha ay ka mid yihiin "Magaca shirkadda". Fadlan hubso inaad uga tagto macluumaadkan "su'aashaada". Mahadsanid!
Qaybta hoggaamineed LED03